रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलको उद्घाटन कात्तिक ५ गते – SunkoshiNews
यस्तो छ ओलीले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको ५३ बुंदे स्पष्टिकरण
भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला काठमाण्डौंमा, द्विपक्षीय सम्वन्ध बारे छलफल हुने
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शाक्यको कोरोनाका कारण निधन
फुटबलका आदर्श मानिने म्याराडोनाको निधन
गण्डकीका सांसद मनाङेकी श्रीमती मुर्ति चोरेको आरोपमा हेटौंडाबाट पक्राउ
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका सम्पदाविज्ञ राजुमान मानन्धरका अनुसार उक्त दिन बिहान प्रताप मल्लकालीन न्हुँपोखरी उद्घाटन हुनेछ । तीन सय ५२ वर्ष पुरानो सम्पदा भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि पुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।
उद्घाटन भएपछि यस वर्षदेखि तिहारमा सर्वसाधारणले रानीपोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्न पाउने छन् ।
भूकम्पपछि हरेक वर्ष भाइटीकामा पोखरीमा रहेको पुलको मुखमा बालगोपालेश्वर मूर्तिलाई राखी दर्शन गर्ने गरिएको थियो । शुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनःनिर्माण गर्ने भने पनि कहिले पुरातत्व विभागसँग त कहिले काठमाण्डौं महानगरपालिकाबीच कुरा नमिल्दा तीन वर्षसम्म पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि पुनःनिर्माणको काम प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
भूकम्प गएकै वर्ष २०७२ माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पु¥याएको सम्पदा पुनःनिर्माणको शुरुआत रानीपोखरीबाटै गर्नुभएको थियो । प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्रको निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन विसं १७२७ मा रानीपोखरीको निर्माण गरिएको शिलालेखमा उल्लेख छ । पोखरीका बीचमा त्यसैबेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो ।
रानीपोखरीसँगै ऐतिहासिक दरबार हाइस्कूल अर्थात् भानु माध्यमिक विद्यालयको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पले भत्काएपछि भानु मावि चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा निर्माण गरिएको हो ।
भवनको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । रु. ८५ करोडको लागतमा नौ रोपनी जमीनमा निर्माण गरिएको सो विद्यालय भवन चारतले र ४० कक्षाकोठाको छन् । विसं १९१० मा राणाका छोराछोरी पढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका पालामा सो विद्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
गत भदौ २३ गते भानु संस्कृत मा.विं.को साँचो भने हस्तान्तरण भइसकेको छ । भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति पु¥याएको उक्त हाइस्कूलको पुनःनिर्माणको शिलान्यास २०७५ साल साउन १८ गते भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक ३, २०७७